नयाँ नोट अनुप्रयोगको साथ तपाइँको एनोटेशनहरू कसरी सुरक्षित गर्ने आईफोन समाचार
नयाँ एनओएस 9.3 ..XNUMX नोट अनुप्रयोगको साथ कसरी तपाईंको एनोटेशनहरू सुरक्षित गर्ने
एप्पल आईओएस .9.3 ..9.3 जारी, आईफोन, आईपड टच र आईप्याड को लागी अपरेटिंग प्रणाली को नवीनतम संस्करण। यस नयाँ संस्करणमा धेरै रमाईलो नयाँ सुविधाहरू मध्ये एउटा सुधारिएको नोट अनुप्रयोग हो। अब देखि हामी एक पासवर्डको साथ हाम्रो एनोटेशनहरू सुरक्षित गर्न सक्दछौं, जसले हामीलाई फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भएका उपकरणहरूमा टच आईडी मार्फत लक / अनलक गर्न अनुमति दिनेछ। आईओएस .XNUMX ..XNUMX मा नोटहरू सुरक्षित गर्नु कुनै जटिल प्रक्रिया होइन, तर यो सम्भव छ कि केही प्रयोगकर्ताहरू यसलाई कसरी गर्ने कसरी राम्रोसँग थाहा छैन। यहाँ हामी तपाईलाई जान्नु पर्ने सबै कुरा सिकाउनेछौं पासवर्ड सुरक्षा नोटहरू नेटिभ एप्पल अनुप्रयोगमा।
कसरी पासवर्ड आईओएस Not नोट सुरक्षित गर्न
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सेटिंग्स खोल्नुहोस् र नोट सेक्सन पहुँच गर्नुहोस्।
एक पटक नोट सेक्सन भित्र, हामी पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईंले अघिल्लो स्क्रिनशटमा देख्न सक्नुहुनेछ, त्यस खण्डमा हामी टच आईडी सक्रिय गर्न सक्दछौं र पासवर्ड थप्न सक्छौं। हामीले थपेको पासवर्ड कुनै पनि हुन सक्छ; यो एप्पल आईडीको पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ।
एकचोटि पासवर्ड थपियो भने हामीले हामीले चाहेको नोटहरू सुरक्षित गर्नुपर्दछ, त्यसैले हामी अब नोट्स अनुप्रयोगमा गइरहेका छौं।
हामी नोट गर्न चाहान्छौं जुन हामी सुरक्षित गर्न चाहन्छौं।
हामी सेयर बटनमा ट्याप गर्दछौं (
तपाईं स्क्रीनशटमा देख्न सक्नुहुन्छ, नोट ब्लक गर्न विकल्प देखा पर्दछ। हामी यसमा खेल्दछौं।
अन्तमा, हामीले पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ जुन हामीले चरण in मा कन्फिगर गरेका छौं। हामी एनिमेसन देख्नेछौं र यो पहिले नै सुरक्षित हुनेछ
एउटा प्याडलॉक शीर्षमा पनि देखा पर्नेछ। जब यो खुला हुन्छ, यो सुरक्षित हुँदैन। जब यो बन्द हुन्छ, कसैले पनि यसलाई देख्न सक्दैन पासवर्ड वा हाम्रो फिंगरप्रिन्ट बिना।
महत्वपूर्ण: नोटहरू पहुँच गर्नका लागि जुन हामीले पासवर्डले सुरक्षित गरेका छौं, हामीले यससँग गर्नुपर्नेछ एप्पल अपरेटिंग प्रणाली को नयाँ संस्करण। यदि हामीसँग आईओएस आईओएस .9.3 ..9.1 को साथ छ भने हामी एउटा पासवर्ड सुरक्षित गर्छौं र त्यसपछि हामी यसलाई हेर्न चाहन्छौं, उदाहरणका लागि जेलब्रोन आईप्याड, हामी यसलाई खोल्न सक्षम हुनेछैनौं, किनकि भर्खरको जेलब्रेक आईओएस .10.11.4 .१ को लागि जारी गरिएको थियो। ओएस एक्सको साथ उही हो: नोटहरू देख्नको लागि हामीसँग म्याकमा OS X १०.११. installed स्थापना भएको हुनुपर्दछ।
माथि वर्णन गरिसकेपछि, मैले त्यस्तो कुराको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्दछ जुन मैले यस प्रणालीको बारेमा मनपराउँदिन: यो यस्तो लाग्दैन कि यो खराब देखिन्छ, तर मलाई लाग्छ कि यसको अभाव छ, र यो यो हो कि यसलाई सम्पादन वा मेटाउन सम्भव हुँदैन। लक गरिएको नोट, वा कमसेकम यो यसको लागि एक विकल्प हुनुपर्दछ। जे भए पनि, पासवर्डसँग नोटहरू सुरक्षित गर्न सक्षम हुनु रोचक नवीनता हो जुन अन्य अनुप्रयोगहरूमा हराइन्छ। के तपाईंले पहिले नै प्रयास गरिसक्नु भएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » नयाँ एनओएस 9.3 ..XNUMX नोट अनुप्रयोगको साथ कसरी तपाईंको एनोटेशनहरू सुरक्षित गर्ने
घातक लागू गरियो। तिनीहरूले के गर्नु पर्छ भनेको नोट अनुप्रयोग पहुँच गर्न यो पासवर्डको साथ वा टच आईडी (यो सुरु गर्नका लागि) खोलेको थियो, दोस्रो कि एपीपी भित्र कसैले पनि उनीहरूले प्रविष्ट गरेको कुरा गर्न सक्दछ (जसलाई तपाईंले चाहानु भएको मानिसहरू राख्नुहुन्छ)। प्याडलक)।
तर यो नोटहरू यो अहिले सम्म थियो पहुँच ... खैर, के बकवास,? म के चाहन्छु कि कुनै पनि अनुप्रयोग अनुप्रयोग खोल्न सक्छ एप्पल को सज्जन मानिसहरु।
सत्यमा कुनै खबर छैन, यो चरण म एन्ड्रोइडमा गइरहेको छु।
भाग्यले साथ दिओस्…
जिगरलाई जवाफ दिनुहोस्
ठिकै छ, यो मलाई ठूलो लाग्न सक्छ, जससँग केहि णी छ, केहि डराउँदैन, स्पष्ट रूपमा त्यहाँ केही गोप्य नोटहरू छन्, फारम सहि देखिन्छ।
एन्ड्रोइडको साथ राम्रो भाग्य (यद्यपि मलाई थाहा छ यो हुनेछैन)।
EGO लाई जवाफ दिनुहोस्
पाब्लो हुर्टा भन्यो
ठिक सत्य यो हो कि म अहिले वा पछिको अद्यावधिक गर्ने योजना गर्दिन, तिनीहरूले ठूलो अपडेट नक्कल फ्याँकेका छन्। सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि यो पूर्ण अनावश्यक छ। प्रत्येक दिन म नोटहरू बचत गर्नका लागि १ पासवर्ड प्रयोग गर्छु जुन सोच्दछु कि त्यहाँ पूर्ण टच आईडी सुरक्षाको साथ यसको योग्य छ र म उही अनुप्रयोगमा सबै कुरा पहुँच गर्न सक्दछु जुन तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ कि १ पासवर्डको साथ गर्न सकिन्छ, नोट्समा एप्पल एप्पल भन्दा यो प्रयास भन्दा अधिक निश्चित पनि । अविश्वसनीय कि यी प्रकारका चीजहरू अब द्वारा भइरहेको छ।
Pablo Huerta लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, आईडीको साथ अनुप्रयोग खोल्न मलाई एक पीडा को लागी एक पटक देखिन्छ ... यस तरिका राम्रो छ ... मात्र तपाईले रोक्न चाहानुहुन्छ र प्रणाली प्रति पूरा अनुप्रयोग होईन ...
के आईफोन एसई को प्रक्षेपण पछि आईफोन SE एस किन्न लायक छ?
एप्पलले पहिले नै आईफोन एसईका लागि केसहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन उनीहरू आईफोन / / s को साथ उपयुक्त छन्